Iwo maPhones matsva anogara kusvika paawa rimwe pasi pemvura! | IPhone nhau
Nezera rega re iPhone, Apple inoshanda zvakanyanya kuvandudza simba nekusimba kwezvigadzirwa zvayoIine iPhone 6s zvinotova zvakanyanya chinangwa cheApple kana zvasvika pakusimbisa izvi zvishandiso.
Kunyaradza kufamba senge bendgate (iPhone 6 iyo inokotama) nevamwe, Apple yakaunza mhando nyowani yealuminium (7000 aluminium) mune yesimbi kesi yeiyo iPhone. katatu kupikisa kwako kukotamiswaChinhu chimwe chete ichi chinoitika nechiratidziro, iyo iPhone nyowani ine inodzivirira kwazvo skrini yakamboonekwa muiyo iPhone, haisi iyo runyerekupe yesafiri kristaro asi yakapihwa mhedzisiro yakanaka yekudonha bvunzo isu takagutsikana.
Asi Uye nemvura?, iyo iPhone 6 uye 6 Plus rangarira kuti yakagara chete masekondi gumi pasi pemvura tisati tadzima zvachose, chimwe chinhu chakatipa chidiki chemaitiro ekuvabvisa kubva mumvura nenguva, muiyo iPhone 6 ne6 Plus Apple yaisanganisira kudzivirira kwepurasitiki pamabhatani ekuchengetedza mvura (isina kunyatsoshanda. ), zvisinei hazvo iPhones nyowani dzinoshamisika mune izvi, neimwe nzira Apple yakwanisa kuita iyo iPhones nyowani inokwanisa kugara inopfuura 1 awa pasi pemvura uye ichiramba ichishanda zvakaringana, rekodhi yeiyo smartphone iyo, ngatirangarirei kunyudza uye haina chero mhando yeIPX chitupa.
Tichifunga yakakwikwidza yakakwenenzverwa nezvinwiwa zveiPhones nyowani, iko kushandiswa kwekushandisa kwemagetsi kugadzirwa uko kwainopa kwakayambuka pfungwa dzangu iyo HZO kambani iyo inobvumira kuve nemagetsi zvigadzirwa zvachose isina mvura uye inodzivirirwa kweanopfuura makore makumi maviri Pasina chero mhando yemakemikari anoshandiswa nemushandisi, ino chiitiko chavanoitisa pazvinhu zvemagetsi vasati vaunganidza mudziyo.
Nekudaro, mushure mekuona inotevera vhidhiyo zvave pachena kwandiri kuti izvi hazvisizvo:
Sezvatinogona kuona, mushure mekunyudzwa kwakati wandei, kune wechitatu maPhones matsva haasi anopfuura hafu yeawa Pasina mvura kugona kupinda mukati mechidzitiro uye kutanga rwendo rwayo runoparadza kuburikidza nemukati mayo, ichivasiya vasina basa, mubvunzo unomuka ndewokuti, Chidzitiro chete chakakanganiswa?
Mushure mekuona kuti mushure meawa kana kunyangwe bvunzo dzekutanga dzechipiri vhidhiyo chishandiso chinobuda chisina kukuvara kana kuti mushure mekudzimwa nemvura vachiri kuramba vachiratidza zviratidzo zvehupenyu, hazvidziviriki kufunga kuti chinhu chega chine zvakakanganiswa iko skrini, izvi zvaizogadziriswa nekuzvitsiva kana kuomesa kuti uone kana zvichishanda.
Nekudaro, isu hatisi kuzonyudza iPhone yedu nyowani, saka chinhu chega chatinofanira kuziva (uye kufara nezvazvo) ndechekuti izvozvi Tichava nemasekondi anodarika gumi kubvisa yedu iPhone kubva mumvura uine chokwadi chekuti ichave ichiri kurarama, tsananguro inokosheswa mushure mekusunungura iwo huwandu hwakawanda hwekuti chimwe chezvinhu izvi chakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6 Plus » Iwo maPhones matsva anogara kusvika paawa rimwe pasi pemvura!